I-Apple ichaza ukuthi ukukhangisa kuzosebenza kanjani enjini yokusesha ye-App Store | Ngivela kwa-mac
I-Apple ichaza ukuthi ukukhangisa kuzosebenza kanjani enjini yokusesha ye-App Store
I-Apple isimemezele ngokusemthethweni ezinye izinguquko ezinkulu eziza esitolo sezinhlelo zokusebenza, kufaka phakathi lezo izikhangiso ezintsha lokho kuzoba khona lapho abasebenzisi bafuna okuqukethwe. Leso sici esisha esithile sibizwa ngokuthi 'sesha izikhangiso ' noma ngesiNgisi 'Sesha Izikhangiso', nemininingwane yekhasi ezinikele ukuthi izici ezintsha zizosebenza kanjani. Izikhangiso zosesho ziyindlela esheshayo yokuthi onjiniyela bathuthukise umsebenzi wabo ngaphakathi kwesitolo sedijithali, kepha lokho kwehlukile kunalokho abantu abazokubona emphumeleni wosesho. usesho olujwayelekile.
I-Apple iveza izigaba ezahlukahlukene ezahlukahlukene, kufaka phakathi eyodwa egcizelela ukuthi ifayela le- 65 por ciento konke i-ascargas ku-App Store woza ngqo kusuka ekusesheni okwenziwe. U-Apple uphinde athi uhlelo olusha yi- "Ukusetshenziswa kahle kwesabelomali sokukhangisa", kukhomba ukuthi onjiniyela kuzodingeka bakhokhe kuphela lapho umsebenzisi achofoza isikhangiso sakhe.
Izikhangiso zosesho kuyindlela ephumelelayo nelula kuwe, yokuphromotha uhlelo lwakho lokusebenza ngaphakathi kwemiphumela yosesho lwe-United States App Store, ukusiza abantu bathole noma baqale kabusha inkhulumomphendvulwano ngohlelo lwakho lokusebenza ngesikhathi abafuna izinhlelo zokusebenza ezifana nezakho. Idizayinelwe ukunikeza abasebenzisi ulwazi lokusesha oluphephile, Izikhangiso Zosesho zibeka indinganiso entsha yokuletha izikhangiso ezifanele ngenkathi ihlonipha ubumfihlo bomsebenzisi.
Izikhangiso zokusesha ngaphakathi kohlelo lokusebenza, zizokwethulwa ngefomu le-beta kusuka UMsombuluko Juni 13, futhi i-Apple ihlela ukuyikhipha ngokuphelele kwesinye isikhathi lokhu kuwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Apple ichaza ukuthi ukukhangisa kuzosebenza kanjani enjini yokusesha ye-App Store
Imessage yamadivayisi we-Android OS?
Ungazilulama kanjani izithombe ezisusiwe ku-iPhone yakho